St. Vincent sy ny sekretera maharitra fizahan-tany Grenadines Grant dia nanolotra an'i Sekretera maharitra McBarnett
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Saint Vincent sy ny Grenadines vaovao momba ny dia » St. Vincent sy ny sekretera maharitra fizahan-tany Grenadines Grant dia nanolotra an'i Sekretera maharitra McBarnett
Novambra 17, 2020
Ny fiandohan'ity andro ity dia natolotr'i St.Vincent sy ny sekretera maharitra maharitra ao amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany, ny fanatanjahantena ary ny kolontsaina Ramatoa Laverne Grant ho an'ny sekretera maharitra, Dr. Resa Noel-McBarnett.
Ny sekretera maharitra Noel-McBarnett dia nandray ny toerany vaovao tao amin'ny minisiteran'ny fizahantany, fiaramanidina sivily, fampandrosoana maharitra ary kolontsaina, izay talen'ny fiofanana tao amin'ny departemantan'ny komisiona misahana ny serivisy.
Dr. Noel-McBarnett dia manana mari-pahaizana PhD amin'ny fampianarana avy amin'ny University of Auckland, New Zealand, MPhil in Education avy amin'ny University of Cambridge, UK, ary BA amin'ny literatiora amin'ny teny anglisy (Special) avy amin'ny University of the West Indies. Izy dia mpirehareha nahazo ny vatsim-pianarana Commonwealth Shared Cambridge, ny vatsim-pianarana Commonwealth any New Zealand ary ny loka Sir Arthur Lewis.
Nilaza ny sekretera maharitra maharitra fa manantena ny hiara-hiasa amin'ireo mpandray anjara mifandraika amin'izany izy amin'ny fampandrosoana ny toerana haleha.
Ny sekretera maharitra maharitra Grant dia notendrena ho ao amin'ny minisiteran'ny fitaterana, ny asa, ny tany ary ny fanadihadiana, izay nanompo tao amin'ny minisiteran'ny fizahantany nandritra ny dimy ambin'ny folo (15) taona lasa.
Nohidian'i Torkia ny trano fisakafoanana sy kafe rehetra, kaomandy amin'ny faran'ny herinandro
Miombon-kery ny birao fizahan-tany any St. Maarten Holandey sy frantsay
17 minitra lasa izay
Ny tsena fitsangatsanganana arabo 2021 dia hisokatra rahampitso any Dubai
STARLUX Airlines dia mandefa sidina avy any Taipei mankany Ho Chi Minh City